Home Gallery of Photos Contact Us
Fad Galbeed 1978
To listen to this poem whilst reading it please click here:
Fad Galbeed audio
U sii faano-guratee
Casar gaaban liiqii
Go'e fuley miyaad tahay?
Waa maxay garmaamadu?
Ma googooska sagalkiyo
Gaade kaa horreeyiyo
Gurigaad ku hoyan layd
Mise gabadhan dhoolkiyo
Gu'goo shaalka xaytiyo
Fad galbeed la moodaa,
Kolkaad gelin is-dhugateen
Dib-u guradku waa baqe?
Waxaad galabta mudataad
Intay goori goor tahay,
Dayax soo lug-gu'i laa
Iyagoo garaaro leh,
Xarragada u gaarka ah
Shafka kaga garaacdee
Giirgiirka caadka leh,
Ku sibbaaqday guudkiyo
Maxaa maanta gaasirey?
Miyay kugu giriifeen?
Mise waxay ka giigeen
Waxaan gocanayaa weli,
Marta debec u gunuddoo
Oo aan geyaankeed
Geesaha ka filanayn,
Gaadmada ku qaaddee,
Gosha iyo horaadkiyo
Gaaddada u faydiyo,
Durba "geb" isku siisiyo,
Gabbashada xishoodka ah
Maxammed Xaashi Dhamac (Gaariye), waxuu tiriyey maansadan sannadkii 1978.
ma afbeelay xiisii?
Afar qaadka socodkiyo
ma eersaday wareeggii.
Orgigii la naaxshee
adhi raacdo dhaqatee
ku asqaysay heestee
naxariis u jeedo leh
aaminee run moodee
dharaartii la gawracay
is ogaaday baan ahay.
Umal yuururaan ahay.
Cudur igu unkamay baa
ayax berri i soo maray
eel uu ka tegay baa
aramaa i hurudoo,
macaan jeceshii oon sun ah
loo ursiiyey malabkee
ku idlaatay baan ahay.
Iintii dadkaan ahay.
caku inan rageedow
waxa igadh ka beermaa
ooryihiinii kici laa
aarankaad ku dubateen.
Urugadan i haysiyo
agoonkaa sedkii go'ay
uurkaygu waa godob
eed hooyo laga galay!!!!.
Sheekadii oo sidii u qasan ayaa gabadhii maalin danbe waxay
aragtay gabadh kale oo yar uu ninka laftiisii sidii oo kale
ugu sheekaynayo oo doonayo iyadana intuu ka danaysto dabeedna
marka uurku u buuxsamo uu ka dhaqaajiyo.
Iyadoo gabadhii la u digaysa waxay tidhi:
Wayl yahay baxsane
bi'i waa warlaay
Adoon laacdan baran
oon weli bislaan
Is banbaani oo
ha ku ababin belo.
biyihii ajo ah
kuma ba'o haraad.
Dawac baadi helay
balan qaad af ka ah
ha u beer nuglaan.
bahal qaba hamuun
ha u soo bandhigin.
maxaa bilis haween
oo baar fidhnayd
been lagu khatalay.
Maxaa bocor ildaran,
maxaa baylah wadhan
haad boobay oo
la bud dhigay hortaa.
Maxaa baydi shilis
burcad iyo labeen
la basaasay ciil.
Maxaa gabadh birlab ah
oo beegsi iyo
baxsan dhali lahayd
aniguba basraay berrigaan
yaraa waan boodi jiray
oon badhi caddaa.
Bartaad taal haddeer
annigaa ku ba'ay.
jeer aan ku baxay
waan beraad la'aa.
Ninkan kuu boqrani
waa xila bilaal.
Anigoo bed qaba
waa bukaan i helay.
i beleeyey buu
adna kugu beweray.
Wuxuu kuu burqaday
igu badowsan jirey.
boggaan eeday buu
barko kugu yidhaa.
waad baahan tahay
bahal looma cuno.
Bur ha daaqin sun ah.
Gabadhii markii uurkii soo baxay ee la ogaaday ayaa la dayrshey oo waalidkeed, ehelkeed, asxaabteedii iyo guud
ahaanba bulshadii oo dhami dayrisay. Iyadoon meelay u ciirsato haysan sedkeediina soo dhow yahay ayey hees
caruureedan murugada leh ugu heestay wiilkii ay uurka
Samow wa alla samow waa,
samow iyo samow waa
Samow wiil gaabsiyow waa
Samow guur baaqdayow waa
Samow geesi ciilanow waa
Habeen god la seexdayoow waa
wixii iga gaadhayow waa
Ma gocor baa aabahaaya?
ma gacalkaagaa ku dayrshey?
ma garab kaagan rag joogin?
Martiyi waa goorxun socode
waxaad orod soo guclayso
waxaad soo maalin gaasho
ma giriyaad baad is keentay?
garnayl baa loo ridaaye
adoon weli lagu gardaadin
maxaa fiintii gadoodshey?
maxaa kalgacaylkii maydhay?
maxaa gabawerey adoogay?
maxaa hooyaday gulaalay?
Hoheey caku guuldaraanta!!!
Guhaadow wiilkayow waa,
kuwii gaasiray codkaaga
kuwii annigana i gooyay
kuwii gocashada abuuray
kolkii garta loo xilsaaray
Arbuhu gofanihii ku yiilay
ma guudkeenuu ka raadshey!
Fuluhu weligii ha goojo-
wuxuu galabsaday ha diido haduu raad gado yidhaahdo halkuu gelayaa adduuunka ma hoos kiisaa ka gaabin?
Wax saan gabanyohow ku leeyahay wuxuu dadku kaaga giigay hadaan guntii soo ogaadey gantaal baad tahay bagooda
gunaad kaga yaal damqaaya
Hoheey caku guul daraanta!!
hadday garashadii sabooshay
hadduu gamashiyey wanaagii
haddii gees lay faquuqay
gefkii loo wada badheedhay
haddii gooni laygu qoolay
garsoore yaqaan saboolka
racfaan baan goobayaaye
Dood wali tixraaceed
Daad waliba taagtii
Duddo wali yagleelkeed
Sabo waliba daaqeed
Damiir wali canaantii
Dawan waliba yeedhii
Dacar wali hulaaqeed
Deelleydu waa shaxe
ninba waa godkuu dego
Dig dheh Faraski Doolaal
Mar labaad ha dananee
majaraha u sii daa
Hadraawoow ku soo durug
Malmal iyo dabqaad keen
Ila didi abeesyada
Dib-ka-naaxa laba kacay
Yuu innoo dardaar werin
Dumbuqeenna shiishka leh
Duwi mayno weligeen
dad hadduu is toydona
danyarbaa sokeeya leh
Ifkaan daaray waakaa
Dalka iyo Jaboutiba
ragga iga danbeeyaa
Kolba dogob ha saaree
Colka wadhaf ma lagu deyey
Deji oo rogaal celi
Dulmar weeye ee garo
lagu yidhi ragbaa dilay
Ee aan Ma-Diiddada
Dhaqso loo dumaalee
ayadoo dabbaal dega
Ninkay duugtey soo galay
Ma inay is dooxdoo
Cirka Danab ka soo dhacay
dabka fiday kamuu iman
Digaa hoos ka noolayd
Degdeg iyo hubsiinona
mid kastaaba duuggeed
Afartaa dheh deelleey
gabbal dumay habeennimo
Inuu damiyey moodee
isagoon digniin qabin
Kolkii waagu daalacay
Casilaadda loo diray
Ma inuu dudaayoo
hadba doc isu qaadaa
Belo waa danbaysaa
Durba fadalku waa maxay
Nin Muraayad daawaday
Foolxumo is diidsiin
kuma doorin karayee
Ma inuu dillaacaa
Duxda hadalku meel lehe
Dusha boogta laga dhayo
aan mililka loo degin
Dawadeeda lama helo
Hadduu doogtey nabarkii
Gacantii wax duugtaay
Dufan baad u baahnayd
Dar Ilaahay uma furin
Goortuu Ris daaqee
Ka dallacay hugiisii
Waa duluc ujeeddo leh
war jiraa dareenkii
danyareey wax garadkaa
Intaa tahay darkaa madhan
Ee layska dawdabo
darxumada ku nooloow
Anna aan dagaallamo
Afartaa dheh deelley
Xididdada dawaafka ah
ee hoos u daadegey
dhulka uma dalxiis tegin
Dardar iyo awoodbay
Buuraha ku didiyeen?
Kala Firidhku deyr iyo
Derbi adag hadduu yahay
kuu diidey socodkii
Intaad duluglahaa tahay
dabatada ku nooloow
Waa daabac kugu yaal
Ha la daayo iyo Hees
Duco iyo habaar iyo
Amar Dawlo kuma baxo
Inta ciiddu dihintahay
dhaqaaluhu daleel yaal
dadna kala sed roon yahay
Dusha ubax ka saarsaar
dakhar waa halkiisii
Gothenburg socdaal ku yimid Abwaanka Maxamed Xaashi Dhamac "Gaariye"
Xafladii shalayto iyo Abwaan Maxamed Xaashi Gaariye
Habeenkii Aqoonta iyo Gaariye
'inuu boqorka Goojaa
laye 'goortii roob helay,
Notes:This poem was composed by Gaarriye in 1980 and is a political allegory.
Maansadan waxaa curiyay abwaanka caanka ah ee Maxamed Xaashi Dhamac (GAARIYE). Isagoo u gabyaya Abwaankii qaaliga ahaa C/lahi Sildaan timacade,Wuxu yidhi:
Xilli waliba deeqdii
Gamaan waliba xoogii
Dawlis waliba xaabkii
Xaabo waa bisaylkeed
Xigsan ina Suldaan galay
Xiisaheeda gaarka ah
Xaasha e af tahanimo Hadii uu xabaal galay
Abwaankii xidigin jiray Murtidii xag loo dayo
Xulashada ahayd iyo Xarragada higaadii
Ayaa xarafkii hoos dhabi?
Faraskii xiddeysnaa xakami ayaa sudhi?
Codkiisi xarraankiyo Kamadhnaa xabeebtee
Xuli jiray wadnahayee Wixii xay ah daayoo
Xawaalada gilgili jiray Xaraka sawki tiri jiray
Geelana xasilin jiray Xakab go'ay hadduu yahay
Xaaddaydi yaa kicin? Gabaygii xalaashiyo
Xaqa sheeg ha joogtee Dan ku xeeban jirin ee
Xeelli-hadal ku caan baxay
Mabda' aan la xadi jirin
Suugaanta xaramka ah Xurmadeedii yaa marin?
Xayndaabkii maansada Geerida xasaysaay
Qasab Kuma Balwayn karo
Wallee been ma qaayibo!
Wallee gabay qardoofa ah
qalbigaygu ma hollado!
Wallee "Qaaf" ujeeddo leh
qiimahayga kuma rido!
Wallee qado ma dhaafsado!
Ninkii beesha qaayiba
Wallee ciidda kama qodo!
heesaha qumbuladda ah,
uma qubo dhugmo la'aan!
Wallee qalad yar kuma daro!
dembi qaranka laga galay,
kama qariyo waratada!
Shacbi qawdhamoo kacay
Wallee qoofal kuma xidho!
qaarka sare ma dhaydhayo!
Haddii ay qurgooyiyo
Wallee gabay ma quruxtiro!
Haddii qoys agoon yahay
wixiisii rag qaybsaday
qaangaarna sare kaco
" Qori sii!" ha joogtee,
Wallee quuso kuma diro!
Waxaruhu sidaan qabo,
biyo kuma qurquriyaan,
anna qiiro mooyee
qasab kuma balwayn karo.
Qaraf iyo tixaa gabay
ku qaraabo uma baran
quudkaygu muu gelin,
qatanaha saboolka ah
dantoodaan ku qummiyaa.
Hadba wiilka qooqane
maalintaasi qoodha ah
ways kala qabweynahay
Qolo sheegasahana, daa!
Iska daa qabiiloo
qarankeenna oo idil
qol yar baan u haystaa.
qaaradaha la kala xidhay
qoqob bay i geliyaan.
Haddaan qabi lahaa taag
may kala qaloodeen,
qodaxdaan ka guri laa
qoys baan ka dhigi laa.........................ma dhamays tirna.
Hayaanku ma meel fog baa	Hillaacu ma beegso baa
Habeenkii socod miyaa	Hadhkii ma ha seexan baa
Waqtigu ma haloosi baa	Ninkii hakadaa boqoolka
Habaaska miyuu dhaxlaa?	Quruumaha hore u guuray
Barwaaqada haybsanaaya	Intaad hiigsan layd gadaasha
Hareerta ka raac miyaa?	Hadduu maalku kaa harraado
Harooyinka gee miyaa?	Hurdada ku dan seeg miyaa?
Adduunyadu waa hadhkaas	Hirba hir buu daba socdaaye
Hankaaga fogee miyaa?	Hawshaada ku toos miyaa?
" Hubsiino halbaa la siistaa" Halkii daran baahidaada
Hantida u qorshee miyaa?	Dantaadu ma haybi baa
Aqoontuna hodon miyaa	Iftiin iyo hibo ku ladhan oo
Indhoolaha haga miyaa?
Waxaa cirka lagu hujuumay	Waxsaa dhulka lagu hubsaday.
Waxaa badahaa hugmaaya	Bidhaansha guntooda hoose -Waxaa uumiyaha hanuunshay	-WAxaa cudurkii halgaaday.
Waxaa jahligii haleelay	Waxaa gaajadii hirdiyey
Dadkaa heegada is geeyey	Dadkaa haqab-beelka gaadhay Hub-qaad haga dayo miyaa?	Ninkaa buurta roobku helay-
Gunteeda ka heesayow	Figteedaa nolol habboon
.Silsiladda "DEELLEEY" oo curatay dabayaaqadii 1979 waxay ka hadlaysaa wacyigii iyo waayihii markaa jirey Dalka Somalia. Waxay ahayd dareen xalaal ah oo abwaaniinta somalia markaa ugu caansanayd qaarkoodu ay dareenkooda ku cabbirayeen cawaaqibxumada ku soo fool leh dalka Hooyo ee hororrada gacanta u galay. Ayagoo aan ka baqayn xadhigii iyo dilkii caadada u ahayd taliskii nacabka ahaa ee markaa talada dalka boobay ayay abwaaniintu tiriyeen maansadan Deelleey. Waxay silsiladdu ahayd dareen wadaniyadeed oon ku salaysnayn eex iyo qabiil eedays balse ka digaysay in haddii aan tabaha dibindaabyada ah la beddelin Somali meel dheer laga dooni doono.
Suugaanta taxanaha ah waxa bilaabay abwaanka weyn ee Maxamed Xaashi Dhamac oo ku magac dheer "Gaarriye". Gaariye oo ah suugaanyahan aqoon yahan ah wuxu daaha ka rogay silsiladan.
wuxuu yidhi :-
Dig dheh deelka maansada
Tixo Dir iyo Daabaca
Ha ka dido shan-xuubluhu
Arrin waa la diga rogey
Doonyihii la raran jirey
Markab baa ka daba yimi
Cirka haadda duushaa
Ka duuduubte samadii
Waxa helay Dayuurado
rag duraa ku soo baxay
Kuwa daafka fidiyiyo
Digtoonaada way kane
Taariikhda duuga leh
waxan ugu hor daabacay
Waa faral dushayda ah
inaan fuliyo ii diray
Sidii loo duddubin laa
Afartaa docdaa mari
Dugsi maleh qabyaaladi
Yaad daawo leediiin
Haddaad duullimaad tahay
Riddo waa u meel dayo
Docor yohow abtiriyaa
Armaad dogobka qiiqa leh
derintaad ku huruddiyo
Dushaaduun ku hurisaa
Tixdu way dagaal timi
Waa daabbad aan biqin
Cilmi baa u diirada
Durba gumuci koowaad
waxay daartay nabarkiyo
waxa doogta ugu wacan
Dawadiise may gelin
Kuwa ararta daajiyo
ragbaan ula dan lee yahay
Deelleydu waa koow
"Nin-kasta oo dakana galay,
Qoluu dabada geliyow,
Dembi dhacay mas'uul ma leh
Markaad hebel duqaysaa,
Reer hebel danqanayaa. Ardaygu na dadaalkiyo,
Dugsigii hadduu gabay,
Delluu meel ka haystaa,
Waxaan daah ka sarnayn,
Isagoon diktoor noqon,
Inuu darajo tolan karo,
Inuu doolar heli karo,
Ama dayday noqon karo,
Daba-laab ku xoogsada "
Xarunta Cilmi baadhista Soomaaliyeed oo Gaariye gudoonsiisey billadda nabada.
Casho Sharaftii Gaariye iyo Ururka Guud ee dhalinyarada Somaliland ee Sweden
Wiswis bayga galay Kaartarow weheshigiinniiye
Waayo-arag intii aan ka helay buugaggii weriyey
Wareerkaad baddeen buu khalqigu weli la taahaaye
Su'aalaan ku weydiinayaa ila sal waaweyne
Isagoo takoor wada ayaa laba wejiileeyey?
Waadaasha xoolaha lumaa weere waw halise
Hadba weerka naag baw xidhaan weydey kii qabaye
Wedkii Maalkom Ekis waan ka naxay wacad Ilaahaye
Waa kee waraabaha dharqaday warangalkii toosay?
Kolka geesi weyraxo ayaa dacar waraabsiiyey?
Yaa wadey raggii Luudar Kiin waagi hanaq gooyey?
Hindidii casayd yaa waddarey wadarna yaw laayey?
Alla weger waxaad belo dhigteen waa ka waasacane
Niksan wayla sahal ceeb haddaad ka welwelaysaane
Qirta Wootargaytyadu ka badan taydun weriseene!
Walbahaarka Falasdiin nin ogi qulub la weydowye
Waddankoodi goortii la dhacay wahabku kooreeye
Waa debed-wareeggii sidii woohow loo yidhiye
Waab iyo ardaa kama galaan weedhka karameede
Ummaddaasi wadhan yaa sidaa wajib kaga yeelay?
Miyaan lala wadaagayn Yuhuud wiirsigiyo ceebta?
Fiyatnaam wixii aad baddeen uunku wada yaabye
Hubka waarriyuun baad aroor wagac ku siiseene
Dayuurado waleecaad qabaa geliyey weesaaqe
Sida dhibic wajiineed wixii gumuc is-weydaartey
Nin waraystay waa garanayaa wahankii Saygoone
Goortuu wasaashaday dhurwaa waaxyihii ubadka
Isu baxe wishiiriga ci'diyo wiida naaguhuye
Raggaad waranka siiseen anoo weli u ooyaaya
Marna waxaan i deynayn duqii ugu fil weynaaye
Hooheey! geeridii Hoo Shi Miin wiilashay gudhaye
Woobiga Angoolee qarxaday wiririgtii yeedhay
Boortuqiiskii wiiqay rabeen inay ku waabshaane
Goortuu wadnaha taabtay bay wegen u fuuleene
Waxay waarrisaba maalintuu calanku waaheelmay
Waqalkiyo daruurihii onkoday webiyadii dooxmay
Guushii kolkii loo waqlalay Neeto widhif raadshey
In wakiil u tago Yuu-En-Oo golaha waaheelan
Maan garan halkuu weyd ka yahay waajibkaa cadiye
Wadhiyey! Maxaad ugu riddeen walagta fiitooda?
Sida ceel wiyeeraad kol hore nooga wabaxdeene
Warshaddiinna dhiiggaan tufaa lagu waraabshaaye
Garaad ma laha ruuxii wabiin wacad la qaataaye
Ka il baxay wallaahida afkaa walalac beenaade
Werwerkii Simbaabwaan qabaa Weris-la-mooddiiye
Waadiga Namiibiya rag baa waayir xidhayaaye
Idinkaa watee Yaan Ismiidh wadhaf ma tuureene
Notes:This poem was composed in 1976 after the United States used its veto in the UN Security Council against the entry of the newly independent state of Angola under Neto.
Qul-acuudu bilaahi - idaajaa nasru-laahi,
Waxaan maanta alhaakum - ilhaamka uga bilaabay.
Hadraawow indhaweydba - sidaydii ma ahaynoo
Waxaan ahay nin arkaya -maanka laaga Ogsooniyo asaraarta dhex yaala - isha laacu u Muuqdo waxaan ahay nin arkaaya- umadayda Tasowday ee usha loo qaban waayey- ee aniga Iga bilow oo abwaankeedu ka seexday- wax Aqoonkii tabaysa afweynoo laga reeyana- Ujeedaa uga dambeysay.
Waxaan ahay nin arkaaya ayaankaygii shi' dhaafay
Umalkeyga hiqdeyda - calool oyga nafteyda
Ilmada iga da'aysiyo- imtixaanka i haysta.
Ma dab baan isku ogaa - anigu aan isku daaray
Uu-fanayskiina guuray- iyana waa iga su'aale
Mar aan aayo la'aanta -seedigay ugu aaro oo
Ubadka dhiiga looga shubaayey- sow ataar li'i maaha.
Ifa-faalaha muuqdiyo- i' shay leedahay maanta
ninba aag ku go'doomo.
Calool oyga nafteyda- ilmada iga da'aysiyo
Ahey way iyo ciil- Aaminaay magacey ba'
idlaaday- ee Aroori ku le'day- looma ooyaha Saaxil- anigaa ku tol belay.
Baadidiinii u eg'ood- iyadii u qabtaan.
Istiqlaalkii sitiinkii- onkodee di'i waayey
Waxna aad uga liita- Ilaah baa i dili doona'e
Anigaa rag ugu liita oo- afadeyda sagaal gu'
"Sebenkii xumaadaba ragbaa sahayda naanays
Cirkaa qabar sanaacigu kaa sawirayaaye"
"Caalinoow Ta’ iyo Woow,
Dir iyo Daabac
Geeridii ina boqor
Silsiladdii Siinleey- I
Silsiladdii Siinleey- 2
Copyright© 2005.Goljanotoday.tripod.com.all rights reserved.